Etsy amin’ny FLM Ambatovinaky indray no hanatanterahan’izy ireo izany izay azo arahina mivantana amin’ny RNM sy TVM manomboka amin’ny 05 ora hariva ho fampaherezana ny mpino rehetra. Tsy adinon’ny filohan’ny FFKM ny pastora dokotera Rakotonirina David nandritra izany ny nanao antso avo amin’ny fanjakana ny amin’ny tokony hitsinjarana ara-drariny ny fanampiana natokana ho an’ireo sahirana eto amintsika. Toraka izany koa ny fampahafantarana ny rehetra ny mangaraharaha amin’ny fitantanana ireo karazana fanampiana azon’i Madagasikara hatramin’izay . Tsy adinony ny niresaka mikasika ilay tambany CVO na COVID organics nandritra izany. Nambarany fa tokony hatao malalaka ny fampahafantarana izany ary tsy terena ny tsirairay. Farany izay tsy kely akory dia nasian’ny pastora dokotera Rakotonirina David resaka ihany koa ny mikasika ny fifandranitana ao anaty tambajotran-tserasera facebook ankehitriny. Tokony zavatra mahasoa no hifampizarana hoy izy ao anatin’izao lalan-tsarotra lalovan’ny firenena izao fa tsy hifandranitra ady.